Sakay (zavamaniry) - Wikipedia
Ny sakay dia zavamaniry avy any amin' ny faritry ny zanapehintany any Amerika, izay hanim-boa, ahitana vihy maro, atao fanatsarana ny tsiron-tsakafo (tsiro somary may). Misy karazany 10 sy zana-karazana maro ny sakay.
Amin' ny ankapobeny dia maniry isan-taona ny sakay. Madinika sy mioko fotsy ny voniny. Ny voany kosa miloko maitso na fotsy amin' ny voalohany fa mihamiloko mena izany rehefa mankany amin' ny fahamasahany vikatry ny fisian' ny atao hoe karôtenina ao anatiny. Vikatry ny fisian' ny alkalôida atao hoe kapsaisinina ny tsirony mafana.
Anisan' ny zanakarazan' ny sakay ny sakaibe izay tsy tena mafana satria tsy misy ilay atao hoe kapsainina sady poakaty. Misy karazana sakay izay ao atao haingon-tanàna. Ny sakay dia ao amin' ny sokajin-javamaniry atao hoe Capsicum iay ao amin' ny fianakaviana Salanaceae. Amin' ireo karazana sakay volena hatao fihinana dia ao ny Capsicum annuum sy ny Capsicum frutescens.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakay_(zavamaniry)&oldid=1011136"
Voaova farany tamin'ny 6 Mey 2021 amin'ny 11:53 ity pejy ity.